Fampiasam-bola amin'ny Fihaonambe maharitra ho an'ny fizahan-tany: seza Dr. Taleb Rifai
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fampiasam-bola amin'ny Fihaonambe maharitra ho an'ny fizahan-tany: seza Dr. Taleb Rifai
Hisokatra voalohany ao amin'ny Sunny Beach, Bulgaria Ma 30-31, ny fihaonamben'ny famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Hifantoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany any Bulgaria sy Eropa atsimo atsinanana izy io.
The Konferansa maharitra ho an'ny fizahantany dia ho sehatry ny famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany mampivondrona ny mpanao politika, ny minisitry ny fizahan-tany, ny tompona tetikasa, ny mpamatsy vola ary ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahantany avy any Bulgaria, ireo firenena eropeana atsimo atsinanana ary ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany manerantany.
Hampiantrano ny hetsika ny Minisiteran'ny Fizahan-tany any amin'ny Repoblikan'i Bulgaria miaraka amin'ny ITIC sy InvesTourism izay eo ambany fitarihan'ny Dr. Taleb Rifai izay sekretera jeneraly teo aloha an'ny UNWTO
Izy io dia handray anjara amin'ny famolavolana ny ho avin'ny dia sy fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanokafana fotoana vaovao amin'ny alàlan'ny hetsika vaovao. Ity hetsika ity dia hiompana amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany sy ny fampiasam-bola any Bulgaria sy any amin'ireo firenena eropeana atsimo atsinanana raha miresaka ny olana sy ny fanamby atrehin'ity faritra ity.
Ny fanokafana ity Fihaonambe tao Sunny Beach, Bulgaria ity dia hisarika mpitarika 400 ho an'ny daholobe sy tsy miankina liana amin'ny famatsiam-bola sy ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ho motera voalohany amin'ny fitomboana ara-toekarena amin'ny ho avy ary ho maodely izay afaka hampiroborobo ny asa tena eo amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana samy manana ny toerana misy an'i Bulgaria sy Eoropa atsimo.
Araka ny nasongadin'i Hon. Nikolina Angelkova, minisitry ny fizahantany any amin'ny Repoblikan'i Bulgaria: “Ny fizahantany amin'ity faritra any Eropa ity dia mitombo haingana miaraka mpizahatany 120 tapitrisa mahery amin'ny taona 2018 sy tapakila totalin'ny fizahan-tany mitentina USD 118.8 miliara izay mitentina 11.7% amin'ny harin-karena faobe ho an'ny firenena eropeana atsimo atsinanana. Bulgaria fotsiny no nahasarika mpizahatany 9.2 tapitrisa ary ny totalin'ny tapakila fizahan-tany dia USD7.6 miliara tamin'ny taon-dasa. Ankoatr'izay, ny pototra fampandrosoana lehibe tsy voatanisa ao atsimo atsinanan'i Eropa dia maneho ny làlana lehibe ahazoana tombony amin'ny famatsiam-bola vaovao ao anatin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany miasa ho toy ny motera voalohany amin'ny fitomboana ara-toekarena amin'ny ho avy ary ho toy ny maodelin'ny fampandrosoana izay afaka hampiroborobo ny fizakan-tena eo amin'ny fiarahamonina eo an-toerana any Bulgaria. sy ireo toerana itodiana any Eropa atsimo atsinanana. ”
Ny valan-dresaka koa dia ho dinika ho an'ny mpandray anjara hiadian-kevitra momba ny fahafaha-mitady tombontsoa sy hanombohana fiaraha-miasa mety ho fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny famatsiam-bola amin'ny fizahan-tany fizahan-tany maharitra hatramin'ny fotoanan'ny tetikasa.
Ny kaonferansa dia nahazo fahalianana be amin'ny faritra sy iraisam-pirenena ary nahasarika ny fandraisana anjaran'ny Minisitry ny fizahantany isam-paritra sy Mediteraneana:
Andriamatoa Gari Capelli, Minisitry ny fizahan-tany any Kroasia
Ramatoa Elena Kountoura, minisitry ny fizahan-tany any Gresy
Andriamatoa Rasim Ljajić, praiminisitra lefitra ary minisitry ny varotra, fizahan-tany ary fifandraisan-davitra any Serbia
Ramatoa Majd Shweikeh, minisitry ny fizahan-tany sy ny fahagolan'i Jordania
Andriamatoa Kreshnik Bekteshi, Minisitry ny Repoblika toekarena ao Makedonia Avaratra
Andriamatoa Haitham Mattar, Tale jeneraly Ras Al Khaimah Manampahefana misahana ny fampandrosoana
Ramatoa Rania Al-Mashat, minisitry ny fizahan-tany any Egypt
Andriamatoa Konrad Mizzi, minisitry ny fizahan-tany any Malta
Mampiseho ny haavon'ny fanoloran-tena sy ny fandraisan'anjaran'ireo Governemanta tsirairay avy sy ireo mpanao politika hamolavola ny indostrian'ny fizahantany ho motera fitomboan'ny harinkarena eto amin'ity faritra ity.
Ny vahiny lehibe hafa dia hanolotra ny Princess Royal Highness Princess Dana Firas izay filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Petra National Trust ary ambasadaoro UNESCO Goodwill, Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha. Ny kaonferansa dia hanatontosa ihany koa ireo mpandahateny kalesy sy solontena avo lenta toy ny Leader Tours, International Hotel Brands, Tourism Project Owners (SEE) manana tetik'asa vaovao haseho, Mpamatsy vola, Banky fampiasam-bola, Orinasam-pitantanana tsy miankina hikambana ary hanao fiaraha-miasa vaovao .
Hataon'i Rajan Datar, fampielezam-peo sy mpanolotra loka an'ny BBC, ny hetsika.
Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny hetsika dia ny Ministeran'ny fizahan-tany any Bulgaria, ITIC, InvesTourism ary Helena Resort.